आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमि-प्रेमिकालाई झुक्किएर पनि कहिल्यै भन्न नहुने ६ कुरा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमि-प्रेमिकालाई झुक्किएर पनि कहिल्यै भन्न नहुने ६ कुरा
पति-पत्नीबीचको सम्बन्धमा टकराव आउनेमात्रै नभएर डिभोर्स नै हुनेसम्मका घटनामा निकै वृद्धि भएका छन् । यतिमात्रै होइन, प्रेमी-प्रेमिकाबीच ब्रेकअपको दर पनि बढ्दो छ । सम्बन्ध टुट्नुमा कुनै गम्भीर र ठूला कारणमात्रै नभएर स-साना असावधानीले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । आउनुस्, आज हामी आफ्नो प्रेमि-प्रेमिका वा पति-पत्नीलाई भन्नै नहुने ६ कुरा जानकारी दिँदैछौं ।
यस्ता छन् मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा हुने ९ फाइदा ! एकपटक अवश्य पढ्नुस्
राशिअनुसार यस्तो हुन्छ प्रेम–चरित्र ! अवश्य जान्नुहोस्
आज महाशिवरात्रीका दिन गर्नुहोस् यी कार्य पाइनेछ अद्धभुत फल ! अवश्य जान्नुहोस्